laacibfm.com » Laacibka Liverpool Andy Robertson Oo Ka Qoomameeyay Arin Uu Ku Sameeyay Lionel Messi
Laacibka Liverpool Andy Robertson Oo Ka Qoomameeyay Arin Uu Ku Sameeyay Lionel Messi
Taageerayaasha Liverpool ayaa ku jecel daafacooda bidix Andy Robertson arimo badan.
Waa marka hore inuu yahay xiddig sarre oo ka mid ah daafacyada bidix ee ugu fiican kubada cagta waqti xaadirkaan iyo inuu waqti adag mariyo xiddigaha garbaha ka ciyaara ee ka horyimaada.
Inkastoo uu 25 jirkaan ku faraxsan yahay inuu awood u sheegto xiddigaha uu ka horyimaado si uu u caawiyo kooxdiisa hadana Robertson ayaa ka qoomameeya hal xiddig uu awood u sheegtay.
Waa dhacdo dhacday kulankii soo laabashada ee ay Liverpool ka badisay Barcelona ee Champions League, markaasoo uu Robertson si ku talogal ah u kala tuuray Lionel Messi isagoo madaxa gacanta ka geliyay.
Iyadoo Taageerayaasha Liverpool ay jecleysteen waqtigaas hadana Robertson ayaa qirtay inaysan aheyn wax uu ku faanayo.
“Marka aan dib u eego waayaheyga ciyaareed ma jiraan waxyaabo badan oo aan ka qoomameynayo sababtoo ah wax walba waa khibrad iga dhigtay qofka aan maanta ahay” ayuu Robertson u sheegay Daily Mail.
“Laakiin marka aan dib u eego arin aan ku sameeyay Messi, waa mida kaliya ee aan ka qoomameeyo. Ma jecli inaan arko muuqaalkaas. Markii aan arkay muuqaalka ka dib ciyaarta aad ayaan uga xumaaday.
Fabinho breaking messi’s legs and Robertson slapping his head is the funniest and best thing you will see all day pic.twitter.com/yUawxza4Mq
“Maalintaas waxaa inagu jirtay dabeecad ah inaysan jirin wax naga horjoogsan kara inaan finalka gaarno, waxaan abuurnay jawi xamaasadeysan, aniga iyo Fabinho ayaa isaga raacaneynay, lugaha ayaa is gashanay taasoo keentay inaan dhulka kuwada dhacno. Inaan sidaas ku sameeyo xiddigii ugu weynaa abid kubada cagta ma aheyn wax fiican.
“Ixtiraam ayaan u hayaa isaga iyo Barcelona laakiin ciyaarta waxay aheyd mid xamaasadeysan madaama guuldarrpo 3-0 aan wadanay, waxaan u baahneyn mucjiso, waxayna taasi noqotay inaan joojino xiddiga ugu fiican dunida.
“Laakiin waan ka qoomameynayaa. Shaqsi ahaan sidaas ma ahi. Dabeecadeyda sidaas ma ahan. Laakiin habeenkaas waxyaabo badan ayaa dhacay oo aan xasuusanin.”